जब अध्यारोमा श्रीमती प्रियंकालाई देखेर रोए निक – Khabar Silo
जब अध्यारोमा श्रीमती प्रियंकालाई देखेर रोए निक
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ को ट्रेलर हालसालै रिलीज भएको छ। फिल्ममा प्रियंकासँग फरहान अख्तर र जायरा वसीम पनि देखिएका छन् । यस फिल्मको ट्रेलरलाई दर्शकले धेरै मन पराएका छन् । एक अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रियंकाले निक उनलाई देखेर रोइरहेको पनि बताइन्।
टोरोन्टो अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिवलको अवसरमा, प्रियंकाले पीपुल्स डटकमलाई बताइन् कि उनको फिल्म द स्काई इज पिन्कको अन्तिम दृश्यले उनका पति निकलाई यत्ति भावुक बनायो कि उनी उनलाई देखेर रोए।
प्रियंका भन्छिन् फिल्मकी निर्देशक सोनाली बोसले शुटिंगको अन्तिम दिन आफ्ना पति निकलाई बोलाएका थिए। तर निक निर्धारित समय भन्दा पहिले शूटिंग सेटमा पुगेका थिए । यस समयमा एक शट चलिरहेको थियो।
प्रियंकाले बताइन् कि शोनालीका अनुसार अन्धकारमा हृदय छुन एक दृश्य सुट भइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा शूटको बीचमा उनले विलापको आवाज सुने । उनले पछाडि फर्केर हेर्दा निक उनको नजिकै उभिइरहेका थिए र प्रियंकालाई भावुक देखेर रोइरहेका थिए।
‘द स्काई इज इज पिन्क’ आयशा चौधरीको जीवनमा आधारित छ, जो १३ वर्षको उमेरमा पल्मोनरी फाइब्रोसिस रोगबाट पीडित भएपछि प्रेरक वक्ता बनिन् । यस फिल्ममा प्रियंका चोपडाले अदिति चौधरीको भूमिका खेलेकी छन्। फरहान अख्तर निरेन चौधरीको भूमिकामा छन। जायरा वसीमले यस दम्पतीको छोरीको भूमिका खेलेकी छन्।
के फ्लप भएको हो अक्षयकुमारको ‘लक्ष्मी’ ?
Posted on November 10, 2020 Author khabar silo
एकपछि अर्को हिट चलचित्र दिएका बलिउडका प्रभावशाली अभिनेता अक्षय कुमारको नयाँ चलचित्र लक्ष्मी सोमवार सार्वजनिक भयो ।ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत सार्वजनिक भएको यो चलचित्र निकै प्रतीक्षित थियो । यसका गीत, पोस्टर, ट्रेलर लगायतका सामग्रीले दर्शकलाई निकै उत्सुक बनाएको थियो । अक्षय कुमार र कियfरा आडवाणीको अभिनय रहेको यो चलचित्र सार्वजनिक भएपछि भने यसले अनपेक्षित रुपमा प्रतिक्रिया पाइरहेको […]
यी ५ बलिउड जोडीको ब्रेकअप हुँदा पूरै बलिउड मात्र नभई सम्पूर्ण फ्यानहरु समेत दुखि भएका थिए !
Posted on May 2, 2021 Author khabar silo
एजेन्सी– बलिउड कलाकारहरु बीचको अफेयरसँगै ब्रेकअपको पनि चर्चा हुने गर्छ। चलचित्रमा मात्र नभई वास्तविक जोडीको रुपमा रहेका कलाकारहरु बीच ब्रेकअप हुँदा समर्थकहरु समेत दुखि हुन्छन्। आफूलाई मनपरेको जोडी टुट्दा फ्यानहरु दुखि नहुने त कुरै भएन। निम्न उल्लेखित चर्चित जोडीबीच ब्रेकअप हुँदा फ्यानहरु दुखि भएका थिए। रणबीर कपूर र दीपिका पादुकोण कुनै समय रणबीर कपूर र […]
दीपिकाको ‘महाभारत’सँग संजयको फिल्मको भिडन्त
केही दिन अगाडि मात्र नायिका दीपिका पादुकोणको मुख्य भूमिका रहनेगरि चलचित्र ‘महाभारत’को घोषणा भयो । यो चलचित्रमा दीपिका द्रौपदीको भूमिकामा देखिदैछिन् । यो चलचित्रको प्रदर्शन सन् २०२१ को तिहारलाई लक्षित गरिएको छ । दीपिका आफैले पनि यो चलचित्र आफ्ना लागि विशेष र चुनौतीपूर्ण रहेको सुनाएकी छिन् । तर, यही मितिमा बलिउडका अर्का सफल निर्देशक संजयलिला […]
म’दिरा सेवन गर्ने, बेच्ने, होहल्ला गर्नेलाई रु १० हजार जरिवाना, सुचना दिनेलाई १०% कमिसन
तपाईले कस्तो प्रेम गरिरहनुभएको छ ? प्रेम अनेक प्रकार